China Aluminium poda yekugadzira yekugadzira maitiro Kugadzira uye Fekitori | Teng'an
Yakaparadzanisa aruminiyamu mapepa eakasiyana makobvu kuona yunifomu ukobvu hwezvinhu zvisina kugadzirwa. Paunenge uchishandisa aruminiyamu ingots sezvinhu zvakagadzirwa, ita shuwa kuti hapana oxide uye yunifomu chidimbu chesaizi.
Iko kushandiswa kwealuminium poda puru kune imwe chinzvimbo mune yekuvaka indasitiri. Yedu chigadzirwa chigadzirwa chine huwandu hwakawanda hwevashandisi muindasitiri, uye mhando yechigadzirwa inovimbiswa. Rega ndiunze kugadzirwa kwealuminium poda.
Kana mbishi zvinhu zvemhando yepamusoro kudzora zvichishandisa aruminiyamu foil zvimedu sezvinhu zvakagadzirwa, iyo foil inofanira kusarudzwa kutanga, iyo oxidized foil inotorwa, uye aruminiyamu mafuru eakasiyana makobvu akapatsanurwa kuve nechokwadi cheyunifomu ukobvu hwezvinhu zvakagadzirwa. Kana aruminiyamu ingots achishandiswa senge mbishi zvinhu, zvinodikanwa kuti uve nechokwadi chekuti hapana oxide uye yunifomu chidimbu saizi.
Bhora chigayo rinoisa yakasarudzwa aluminium foil kana aluminium particles uye aqueous solution yezvakasiyana zvinowedzerwa nemafuta muchigayo chebhora. Munguva yekukuya maitiro, tembiricha iri mumuchina inofanira kunyatso kudzorwa. Kana iyo tembiricha yakanyanya kukwirira, inogona kugadziriswa nekutonhora nemvura. Mirira kukwana kwechinhu Kana izvo zvinodiwa zvasangana, muchina unomiswa. Iyo yekukuya rubatsiro yakashandiswa inogona kuita bhora yekugaya maitiro pasina kunamatira bhora, uye hupfu neupfu hazvizonamatira, kuitira kuti bhora rekugaya rifambe zvakanaka. Iyo poda yemvura inogona kuburitsa zvakafanana poda yealuminium mune inogadziridza aqueous, iri nyore kukuya. Iyo ngura mumiriri inogona kudzivirira iyo poda yealuminium kubva kumakemikari kuita nemvura. Iyo yekumira mumiriri inogona kudzivirira iyo aluminium poda kubva kusangana nemhepo uye kugadzirisa nemvura iri muchigayo chebhora, ndokuti, iyo poda yealuminium yakaputirwa. Iyo yekugezesa inoshambidzwa neiyo oxide iri muchigayo chebhora. chigadzirwa mhando.
Mushure mekuregedza bhora chigayo chamiswa, pakarepo wedzera pre-yakagadzirirwa kuburitsa mvura mumushini, itange iyo uye unomhanya kwemaminetsi matatu kusvika mashanu, ita kuti muchina ufinhe uye usanganise, shandisa vharumu kuyamwa izvo zvinhu mutangi rekuchengetedza. Wobva washandisa 30 ~ 50kg yemvura yakachena, Flush zvinhu zvakasara mumushini, uye wozoshandisa vharuvhu kuyamwa mvura kupinda mutangi rekuchengetedza kwenguva pfupi.
Kupererwa nemvura mumuviri Isa Sefa yekutsveta mukati mekutsveta firita tangi, wobva wavhura yeturu yekuchengetedza tangi yekubvisa vharuvhu, woisa tangi remvura mutsiva tangi yekutsveta. Mushure mekunge tangi razara, vhara vharuvhu, mweya wekubvisa pombi, vhura vharuvhu yekushaiwa mvura uye yevha yekuchengetera mvura tangi vharafu, Ndiani anofanirwa kuyamwa mutangi rekuchengetera mvura, kuti ishandiswe zvakare. Iyo slurry pane yekutsveta firita inosunungurwa mushure meiyo yakasimba yezvinhu inokwanisika, uyezve ndokurongedzwa mumiti.
Pashure: Iko kukanganisa kwealuminium poda pane aerated kongiri
Zvadaro: Iyo yekushandisa musimboti yealuminium poda peta mune aerated kongiri
aac block kuvaka zvinhu
aruminiyamu upfu zvivakwa
aluminium poda inoshandiswa muabac block
Nezve zvigadzirwa zvekugadzira